I-ResponseTap: I-Smart Match Intelligent Call Tracking Attribution | Martech Zone
NgoLwesine, ngoMashi 8, 2018 NgoLwesithathu, ngoMashi 7, 2018 Douglas Karr
Shayela ipulatifomu ye-Intelligence, ImpenduloThepha, ithuthukise isici esisha, Ukufaniswa okuhlakaniphile, evumela abasebenzisi ukuthi babone inani eliqondile lekholi yamakhasimende ngayinye engenayo futhi bayinikeze kumthombo wokumaketha, ngisho nasegameni elingukhiye.
Ukukwazi ukulandela umthombo oholayo bese unikeza imali engenayo kanye ne-margin kube yintuthuko enkulu kithina. USimon Hoe, iGlobal Head of Digital ku Umkhumbi 1st
Ithuluzi likhuthaza ukusetshenziswa kwedatha ukukhulisa imikhankaso yabo bobabili abathengisa ngaphakathi ezindlini kanye nama-ejensi wokumaketha, kanye nokuvumela ama-ejensi anamakhasimende abiza izingcingo ukuba abike nge-ROI ngqo.
Kuze kube manje, ukuxhuma imali engenayo yezingcingo emsebenzini wokumaketha kudinga abenzeli bezikhungo zokuxhumana ukwenza amanani asemqoka kwisistimu ehlukile, noma ukusebenzisa ukuhlanganiswa nohlelo lwabo lweCRM, ebelingalungile ngaso sonke isikhathi noma kungenzeka.
I-Smart Match ucezu olungekho lwephazili lokubika labakhangisi. Awugcini nje ngokwandisa imikhankaso ngokuya ngamakholi amangaki umkhankaso ngamunye owenziwe, kepha ungaguqula indlela yakho ngokuya ngemali engenayo noma inzuzo etholakalayo. Kulula ukusebenzisa i-Smart Match ukuthola imithombo eqhuba ukuthengiswa kwefoni yakho okubiza kakhulu. UNick Ashmore, Iphini Likamongameli Wezokukhangisa kwa-ResponseTap
Manje basebenzisa i-Smart Match, abathengisi, ngokuhlanganiswa okuyi-zero, bathi ukuthengiswa kwekholi yocingo kuyo yonke indawo yokuthinta eyenzekile ngaphambi kocingo.
Imibiko Yesabelo Sezingcingo Ifaka:
Umbiko Wokubuka Konke Wokutholwa - ukubonakala kwayo yonke imikhankaso yakho nomsebenzi wokumaketha endaweni eyodwa. Guqula phakathi kokubukwa koMkhankaso, Isiteshi noma okuMaphakathi ngemininingwane lapho umsebenzi wokukhangisa ungenisa khona izingcingo eziningi, imali engenayo nenzuzo.
Umbiko Wokuqhathanisa Isichasiso - Qhathanisa amamodeli wesichasiso amaningi asuselwa kuzinyathelo ezahlukahlukene. Thola ukuthi ivolumu yamakholi, imali engenayo yokuthengisa nenzuzo yehluka kanjani kumodeli eyodwa kuya kwenye.
Thola i-Smart Match Demo
Tags: isichasiso sokukhangisai-bing ppccall isichasisoisichasiso sesiteshiizikhangiso ze-facebookgoogle eziphilayoi-google ppcisichasiso sekholi ephilayoimpenduloumdlalo ohlakaniphile